Ogaden News Agency (ONA) – Norway: Shir Saddex maalmood soconaya oo ku saabsan Wax wada-qabsiga ururada Yurub & Jaaliyadda Soomaalida Ogaadeenya oo lagu marti-qaaday
Norway: Shir Saddex maalmood soconaya oo ku saabsan Wax wada-qabsiga ururada Yurub & Jaaliyadda Soomaalida Ogaadeenya oo lagu marti-qaaday
Oslo: Waxaa gelinkii dambe ee maanta caasimaddaOslo eeNorway, ka bilaabmay shir balaadhan oo ay kasoo qeyb galeen Madax Norwegiyaan ah, mas’uuliyiin kasocda ururada kajiraNorway, aqoon yahanno Yurubiyaan ah iyo khubaro xaga socdaalka ah oo kasocday wadanka Mareykan ah.
Shirkan oo socon doona Saddex maamood ayaa lagu falanqeyn doonaa wax wada-qabsiga ururada Ajnabiga ah, iskaashiga dhex mara ururada ka jira dal gudihii iyo muhiimadda ay leedahay kocbicinta iyo fahanka dawladaha martida loo yahay.
Shirkan oo ay furtay Wasiiradda Arimaha Qoyska ee dalka Norway Ms. Inga Marta Thorkildsen, ayaa waxaa hadal qiimo badan ka jeediyey goobta Gudoomiyaha Jaaliyadda Soomaalida Norway, Xaaji Abdullahi oo sheegay inay jiraan ururo badan oo dhisan laakiin se aysan jirin garab-qabasho dhanka laamaha dawladda ah, taasna ay keentay habac-sanaan badan oo xagga ururada ah.
Waxaa sidoo kale, kulankii maanta hadal kooban oo ku saabsan dhiiri-gelinta iyo abaabulka Dhalinyarada kasoo jeediyey goobta Mudane Ahmed oo matalayey ururka OYSU-Norway, isagoo kasoo qeyb galayaasha ugu baaqay in la ogaado awooda iyo waxtarka dhalinyarada.
Ururka KIM oo ah laanta socdaalka iyo isku-xidhka ee dawladaNorway, ayaa uga mahad celisay Jaaliyadda Soomaalida Ogaadeenya & ururka OYSU-Norway dadaalkoda joogtada ah ee ku salaysan wax-wada qabsiga iyo tusaaleynta joogtada ah ee ay la wadagaan marwalba ururka KIM.
Halkan ka daawo filimyaroo laga soo duubay qaabka uu shirka u socdo:
Shirkan oo la filayaa in lasoo gabagabeeyo khamiis, ayaa la filayaa inay ka soo baxaan go’aamo wax tar u yeelan doona ururada ka jiraNorway.